DEG DEG+DAAWO: Jubbaland oo ku dhawaaqday warkii ugu cuslaa & Xukuumadda ha la rido. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDEG DEG+DAAWO: Jubbaland oo ku dhawaaqday warkii ugu cuslaa & Xukuumadda ha la rido.
DEG DEG+DAAWO: Jubbaland oo ku dhawaaqday warkii ugu cuslaa & Xukuumadda ha la rido.
August 31, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 10
Warsaxaafadeed ka soo baxay kulan ay yeesheen xubnaha Golaha Wasiiradda Jubbaland caawa ayaa laga soo saaray warsaxaafadeed ka hadlaya xaaladdihii u dambeeyey, gaar ahaana go`aanadii ay gaartay Xukuumadda Soomaaliya ee xayiraada lagu saaray garoonka Kismaayo.
Qoraalka waxaa lagu cadeeyey in aysan Jubbaland marnaba u hogaansami doonin amaradii duulista hawada la xariiray ee kasoo baxay dawladda Soomaaliya, sidaas oo kale waxay markale sheegtay Jubbaland in ay u madax banaan tahay arrimaheeda Dastuurku u ogol yahay.
Jubbaland ayaa ugu baaqday xildhibaanada labada golle ee baarlamaanka Soomaaliya in ay garowsadaan xaaladdaha uu ku sugan yahay dalka, gaar ahaana Xukuumaddii ay kalsoonida siiyeen oo ku tumanaya sharciga, sidaas awgeedna loo baahan yahay in ay garowsadaan masuuliyadda saaran.
FAAHFAAHINTA HALKAAN KA AKHRISO, KANA DAAWO
Wasiir katirsan DFS oo xaqiijiyay xariga wasiir Janan “Waa dambiile dhibaato ka gaystay Gedo”.
Maamul ku sheega laga sheego xamar meeshay wax ka qaban lahaayeen arimaha wada cakiran ee xamar waxay ku mashquuleen bur-burinta maamulada gobalada soomaaliya.
Xamar baysan faro ku hayan markaasay dagaalo iyo fara galin u aadaan gobalo aad uga fog xamar.Waa dad ay u cadahay in ay soomaaliya sii kala dhantaalaan.Waxaad moodaa in uu cadawga soomaaliya uu nimankaas ku soo yiri marna ha yeelina in ay gobalada soomaliya horukac suubiyaan.Haddii ay diyaar u yahiin wax wanaajin xamar bay marka hore wanaajin lahaayeen.Meeshay soomaaliweeyn isu keeni lahaayeen wayba sii kala geynayaan soomaali.Ina farmaajo waa miskiin Illaahay (SWT).
Sax Weeye/ Hadalka Siyad Axmed Madoobe”>**(farmaajo”Astaamaha lagu Garto Hogaamiyaha Xun
1)Farmaajo: Ethiopia U Dhiibay geesikii soomaaliyeed?..Qalbi-dhagax.
2)Farmaajo”: wuxuu Diiday Shabaab Lagu daro Liiska Argagixsada?
3)Farmaajo”:wuxuu ku fashimalay Dhisidii Ciidankii Qaranka (CXDS)
4)FARMAAJO” 500 ILAA 600 CIIDAN BEELEED/HAWIYE AYUU U QEEBIYAA (MUSHAAR)(AGAB-MILITARY
GOBOLLADA/ DALKA SOOMAALIYEED (Xaquuqdii wuu Inkiray)hubkii iyo saanad/Habargidir(Abgaal Ayuu hubeeya oo kaliyah)?…..
5)kismaayo & Mareexaan, hawiye, farmaajo wey ka siman/yihiin (colaada/kismaayo.)
HA DHACO FARMAAJO/ CADAWGA- JUBBLAND, BAYDHABO, PUNTLAND?….
VIVA VIVA KISMAAYO/ SHUUSHOOW/ BAX- (dOONI-MEYN WIXII CADAW KISMAAYO KU AH)
Haddii Axmed Madoobe loo oggolaado inuu is doorto rallina looga noqdo ku tumashada dastuurka maxa u diidaya dawladda dhexe inay doorashada lawada sugayo is doorato sida Axmed Madoobe, dabcan wixii caddiifad qabiil ah waa gaarkeeda iyo kab iyo laxaysi laakiin Axmed Madoobe in la mariyo sharciga iyo qaynuunka dalka u yaallo waa waajib, beesha caalamka ayaa diidday doorashada Axmed Madoobe innaga kab iyo lax ahaan caddifaddeennu waxbo soo kordhin mayso, waxna isugu tari mayno caddaalad darro iyo muduq maasuq, waa hubaal beelaha darood lagu xanto xad gudub iyo caddaalad darro.
Sax Weeye”: Farmaajo” Dalka ku eegi mayno, Doorasho ayaanu Qaban”..Geesi Axmed Madoobe
cadawtinimada” Farmaajo & Beesha Mareexaan isku Raacaan jubbland” Wey Eeedi Doonaan?..
Horaa Loo Yiri” (Mareexaan” ISKA GOWRAC MOOYEE GUUL KU FAAN MA LEH!
Kiinyatiga hadu ka saarii laha Jubbaland,oo boqol mar is dooran laha, cidd kahor imaadii lahayd majirayn. Lakiin intu cadowga Somaliyeed oo biliilgeysan rabta baddena oo hosta ku haysto amarna ka qata, waxa wajib nagu ah iin hal meel uga soo jeesano jiis kan edebta daran oo buuryada ujaaqo kiinyatiga.
Atoore: kkkk kkk kkkk weli ma hadasha? Waxan filayay inaad C/weli Gaas boorsooyinka u qaadday, markii isugu kaaya dambaysay waxay habeenkii doorashada C/weli Gaas ceebtu Ka raacday, waxan kuu sheegay inuusan soo laaban doonin, maantana waxad iga guniddaa Axmed madoobe inuu soo laabanayn, doosho kalena Jubbland Ka dhacayso fadlan tariikhda maanta meel ku qoro, xukunka iyo taladu waa meerto, qofna dhaxal uma helin, digtatori siyad barre ayaa noogu filan cibro qaadasho, Axmed madoobe doorasho xor iyo xalaal ah sida tii puntland ha qabto.’ Wixii fawdo ah cidna laga yeeli maayo. Waxaadna ogaan doontaa sida dhuusamareeb in Amison taangi la geli doonto.waddanka somalia 🇸🇴 gacanta waxa ku hayso beesha caalamka, loogamna fadhiyo qof inuu is doorto, haddii Axmed Madoobe tan u meel marto Farmaajo iyo khayre iyaguna way is dooran taana ogoow.
kkkkkkkkkkkkkk Atoore weli wuu Hadlaya maxa talo ah ?
Dab La Riday: sxb long time ago, salaan gobeed kaddib, Atoore waxan u filayay inuu Adeerkiis C/weli Gaas raacay, maanta ayaan ku arkay kiiyoo hadlayo. Malaha ninku ma qajilo, wuxuu difaacaya nin doonayo inuu isagu sharciga gacantiisa isku doorto kkk kkk kkk haddii lays dooran karo adeerkii C/weli Gaas baa isdooran lahaa.
Dee sxb muddo fog ismaynaan arag salaadtii garaadka iga guddoon.
Somaliya ma u baahan-tahay shisheeye ciidan u tababara?…
Su’aashaas jawaabteeda oo kooban waa maya waayo wadan kasta isagaa ciidankiisa tababara gashana dhaqankiisa iyo wadanimadiisa.
Dawlada Somaliya ee hadda jirta wey la socotaa arimahaas mana awoodo inay yiraa MAYA lacagta na siiya anagoo tababarka ku filane.
@ Garaad kayse
salaan sharaf Garaad, waan maqna waxaan soo noqday dhawaan.
Atoore wuxu yiri waan soo cimraystay sanadkan 2019.
Adeerkiis cabdiweli gaas wuxu moqadisho ka furanaya xisbi siyaasadeed tolow Atoore af-hayeen ma u noqonaya GAAS uusbuur.